Igbo, John: Lesson 124 - Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya na Tọmọs (Jọn 20:24-29) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 124 (Jesus appears to the disciples with Thomas)
3. Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya na Tọmọs (Jọn 20:24-29)
29 Jizos si ya, N'ihi na i huworom, i kwere. Ngọzi na-adịrị ndị na-ahụbeghị, ma kwere."
Anyị amaghị ma Tọmọs ọ na-emetụ Jizọs n'ahụ ma ọ bụ na ọ na-enwe afọ ojuju ịhụ ụja. Ihere nwere ike ime ya n'ihi ekweghi kwe ya ma nwee obiike. Jizọs kpọrọ okwukwe nke Tomasi na-ekwupụta nkwenye na-agba àmà nke anya, ma Onyenwe anyị chọrọ ime ka okwukwe ya dị elu, ịtụkwasị ya obi na-enwe obi ike n'okwu ya n'amaghị ịhụ ya n'onwe ya. Onye chọrọ nrọ na ọhụụ na ọdịdị iji gosi na okwukwe ya bụ onye mbido, ọ bụghị onye tozuru okè ma ọ bụghị nke ọma. N'agbanyeghị nke ahụ, Jizọs pụtara n'ihu ndịozi ya ọtụtụ ugboro iji mee ka okwukwe ha sie ike n'akụkụ ndị dị oké njọ.
Ndị kwere ekwe na-ahụghị ya bụ ndị Jizọs gọziri ma nweta obi ụtọ. Ezi okwukwe na-eme ka ikike dị ukwuu karịa anyị karịa ọhụụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe. Nkwuwa okwu mmadụ nwere n'okwu Chineke na-asọpụrụ Okwu a na-adịghị ahụ anya.
Ebe ọ bụ na ọdịdị Kraịst, ndị na-ezisa ozi ọma na ndịozi ewerewo ikwusara anyị oziọma na Akwụkwọ akụkọ. Mbilite n'ọnwụ Jizọs bụ mkpọsa maka ọgbọ ọhụrụ, nke ndụ Chineke na-achịkwa obi ndị kwere ekwe. Okwukwe anyi abughi nani ihe ndi ozo; ọ bụ ndụ na mgbakwunye Kraịst ahụ bilitere. Nke a bụ ọrụ ebube nke oge anyị; ọtụtụ nde mmadụ kwere na Jizọs n'amaghị ya, n'ihi na ha sitere n'okwukwe nweta ike nke ndụ ebighị ebi.
Ọtụtụ Ndị Kraịst ga-atụfu ihe onwunwe ha, ndị ikwu na ndụ ha. Ha nwere eziokwu site n'okwukwe na okwu nke Kraist, okwukwe nke na-abụghị ihe. Jizọs na-akwụghachi okwukwe dị otú ahụ ụgwọ site n'okwu ya na ọbịbịa nke ndụ ya n'ime onye kwere ekwe. Okwukwe anyi na-agunye ndi mmadu nile, ma na-acho anyi na Jisos Onye nzoputa anyi.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị bụ onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe anyị. Ị hụrụ anyị n'anya, eziokwu gị na-abịakwute anyị site n'okwu gị. Ugbu a ekwenyesiri m ike na ị ga-azọpụta m na ọtụtụ ndị enyi m, ị ga-eme ka ha dị ndụ na okwukwe dị ndụ n'aha gị, ka ha nwee ndụ ebighi ebi na ọṅụ dị ukwuu.
Gịnị mere Jizọs ji kpọọ ndị kwere ekwe 'gọziri agọzi' ndị na-ahụbeghị ya?